म कसरी Pinterest मा एक उत्पादन किन्न सक्छु? ➡️ अनुयायी ▷
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 268
बाहेक एक पाना हो कि महान नयाँ परियोजनाहरु उत्पन्न गर्दछ, Pinterest पनि सूचीकृत गर्न सकिन्छ एक व्यक्तिगत र व्यापार नेटवर्किंग कम्पनी को रूप मा। यसको मतलब यो हो कि मानिसहरु उपयोगी उत्पादनहरु पाउन सक्छन् र उनीहरुलाई एक दिन को लागी दिन को आधार मा प्रयोग गर्न को लागी, घर छोडेर बिना पनि।
डिजिटल वाणिज्य निस्सन्देह हालैका वर्षहरुमा विस्फोट भएको छ, अझ धेरै महामारी को आगमन संगै जहाँ मानिसहरु उनीहरु बेच्न वा किन्न आफ्नो घर छोड्न सक्दैनन् केहि चीजहरु। यो दिईयो, प्लेटफार्महरु पनि रिमोट सेवाहरु लाई अनुकूलित गरीएको छ र सबै प्रयोगकर्ताहरु जो आफ्नो आवश्यकताहरु लाई स्वीकार गर्न चाहान्छन् कृपया।
आज, Pinterest सबैभन्दा भरपर्दो पृष्ठहरु मध्ये एक हो र सबै भन्दा माथी आदर्श चीजहरु किन्न जब राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न को लागी। सबै कारण मापदण्डहरु को लागी कि प्लेटफर्म सबै प्रयोगकर्ताहरु को लागी समायोजित गर्दछ, जो यो उद्देश्य को आवेदन को एक रूप बनाउँछ।
Pinterest मा किन्नुहोस्
तपाइँ पहिले नै थाहा पाउनुहुन्छ कि उनीहरु सक्छन् Pinterest मा विभिन्न चीजहरु किन्नुहोस् र कि मानिसहरु पृष्ठहरु को एक प्रकार को एक प्रोमोटर को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। जे होस्, तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ कसरी ती सामग्रीहरु, तत्वहरु, चीजहरु, आदि को एक दिन को लागी दिन को आधार मा ध्यान आकर्षित गर्न को लागी किन्न सक्नुहुन्छ।
पाइन्टेरेस्टमा किन्नको लागि चरणहरू
तपाइँ सेवा वा उत्पादन को लागी उनीहरु Pinterest भित्र खोज्नु पर्छ
पृष्ठ मा लग इन नगरीकन यो तपाइँ को लागी किन्न वा एक उत्पादन खोज्न को लागी असम्भव हुनेछ
आइटम Pinterest गृह पृष्ठ मा देखा पर्नेछ
तपाइँको आवश्यकताहरु अनुरूप एक छान्नुहोस्
विक्रेतालाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाइँको व्यवसाय गर्न सुरु गर्नुहोस्
कुनैपनि अवस्थामा, प्लेटफर्म आफैंले तपाइँलाई बिक्रेता को प्रतिष्ठा मा एक नजिक बाट हेर्न को लागी संभावना दिन्छ। यो यो विश्वसनीयता को एक तरीका हो कि एक उत्पादन किन्न जब प्रयोगकर्ताहरु लाई दिन्छ।
म कसरी Pinterest मा बेच्न सक्छु?
अर्कोतर्फ, मानिसहरु चीजहरु बाट पैसा बनाउन को लागी उनीहरु समय संगै बनाईएको हुन सक्छ। यस को लागी, यो जरूरी छैन कि तपाइँ तपाइँको खाता एक ब्यापार एक मा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ, किनकि तपाइँ यसलाई व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ।
चाहेको अवस्थामा Pinterest मा एक उत्पादन बेच्नुहोस्, यो अत्यन्तै आदर्श हुनेछ कि तपाइँ पृष्ठ को मुख्य आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नुहुन्छ: उत्पादन पेश गर्नुहोस्, व्यक्तिगत डाटा को एक सूची पठाउनुहोस्, भुक्तानी विधिहरु लाई समावेश गर्नुहोस्, र त्यो हो!
Pinterest मा बेच्न को लागी कदम
Pinterest प्लेटफर्म प्रविष्ट गर्नुहोस्
उत्पादन बेच्न चाहानुहुन्छ एक पिन अपलोड गर्नुहोस्
प्रश्नहरूको जवाफ दिंदा एक सम्मानजनक दृष्टिकोण देखाउनुहोस्
अनुरोध गरिएका उत्पादनहरु पठाउनुहोस् एक पटक भुक्तानी गरीएको छ
Pinterest यसको विधान संग धेरै स्पष्ट छ जहाँ यो सुनिश्चित गर्दछ कि यो लेनदेन को लागी जिम्मेवार छैन प्लेटफर्म को माध्यम बाट बनाइएको। तर उनी आश्वासन दिन्छन् कि यो क्षति को बहाली को एक महत्वपूर्ण माध्यम हुनेछ।
सबै चरणहरु जुन मानिसहरु लाई पछ्याउन को लागी प्राप्त गर्न को लागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछ अझ राम्रो नतिजा र विश्वसनीयता जो उत्पादन को प्रयास मा। जे होस्, मुख्य कुरा यो हो कि तपाइँ तपाइँको खरीद र बिक्री मापदण्ड को अनुसार हेर्नुहुनेछ।
1 Pinterest मा किन्नुहोस्
1.1 पाइन्टेरेस्टमा किन्नको लागि चरणहरू
2 म कसरी Pinterest मा बेच्न सक्छु?
2.1 Pinterest मा बेच्न को लागी कदम